Myan Ball – Page 173 – MyanBall is favourite news and entertainment website.
အသင်းမှာ ဥရုဂွေးတိုက်စစ်အတွဲ ကို ပုံဖော်ရန် ဆွာရက်ဇ် ပြီးတော့ ကာဗာနီကို ခေါ်ယူမယ့် အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်နည်းပြ ဆီမြွန်နီစာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေး ပေါင် ၃၆၇ သန်း ပါဝင်တဲ့ ကာလရှည် စာချုပ်သစ်တစ်ရပ်ကို ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့ ဘာစီလိုနာ လူငယ်တိုက်စစ်ကစားသမားလေး အန်ဆုဖာတီအာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူ တော်ရဲရားကို အပြိုင်ခေါ်ယူချင်နေတဲ့ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ် နဲ့ တိုရီနို အသင်းနာပိုလီ တိုက်စစ်မှူး မီလစ်ခ်ကို ခေါ်ယူရန် အေးဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့ ဒီနေ့ လန်ဒန်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ့် စပါးအသင်းသောမတ်စ်ပါတေး နဲ့ ဟောက်ဆန်အဝါး တို့အစား ရိုးမားကွင်းလယ်လူ ဒီယာဝါရာ ကို စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ အာဆင်နယ်အသင်း
ဘင်ဖီကာ ကို ပြန်သွားရန် အိပ်မက် ရှိတယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ အာဆင်နယ်နောက်ခံလူ ဒေးဗစ်လုဇ်
အာဆင်နယ်နောက်ခံလူ ဒေးဗစ်လုဇ်ဟာ ပေါ်တူဂီကလပ် ဘင်ဖီကာ ကို ပြန်သွားဖို့ အိပ်မက်ရှိတယ်လို့ ဝန်ခံပြီးနောက် ဘင်ဖီကာ ဥက္ကဌ လူးဝစ်ဖီလစ်ပီဗီအဲရာ နဲ့လည်း ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘရာဇီး နောက်ခံလူဟာ…
ဆာနေးအတွက် သဘောတူညီမှုရရန် လူးကပ်စ်ဟာနန်ဒက်ဇ်ကိုပါ ထည့်သွင်းကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ ဆာနေးကို ချဥ်းကမ်းမှု၌ လူးကပ်စ်ဟာနန်ဒက်ဇ်ကိုပါ အလိုက်ပေးပြီး မန်စီးတီးအတွက် ချိုမြိန်စေမယ့် ကမ်းလှမ်းမှုကို လုပ်လိုက်တယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဂျာမန်ဘီလူးအသင်းဟာ တောင်ပံကစားသမားကို ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကတည်းက ခေါ်ယူရန် နီးစပ်ခဲ့ပြီး…
နာပိုလီကွင်းလယ်လူ ဖာဘီယန်ရုဇ် ကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် နဲ့ ဘာစီလိုနာ အပြိုင်ခေါ်ယူမယ်လို့ သတင်းထွက်
ဘာစီလိုနာ နဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းတို့ဟာ နာပိုလီ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖာဘီယန်ရုဇ်ကို ခေါ်ယူရန် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။စပိန်လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟာ စီးရီးအေကလပ်အသင်းနဲ့အတူ ခြေစွမ်းပြကစားနေပြီး မန်စီးတီး နဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းတို့ကလည်း စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နာပိုလီအသင်းဘက်ကတော့…
တီမိုဝါနာကို ခေါ်ယူချင်တယ်လို့ လီဗာပူးလ်အသင်းဘုတ်အဖွဲ့ကို ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ဂျာဂင်ကလော့ပ်
လီဗာပူးလ်အသင်းနည်းပြ ဂျာဂင်ကလောပ့်ဟာ လိုက်ပ်ဇစ်တိုက်စစ်ကစားသမား တီမိုဝါနာကို ယခုနွေရာသီမှာ ခေါ်ယူချင်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ကြိုးကြာနီတို့ဟာ ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ ပြိုင်ပွဲစုံ ဂိုး (၃၀) သွင်းပြီး (၁၂) ဂိုးဖန်တီးထားတဲ့…
ဘာစီလိုနာ တောင်ပံကစားသမား အူစမန်နီဒမ်ဘီလီကို လီဗာပူးလ်အသင်း ပြန်လည်အာရုံစိုက်နေတာလား?
ဘာစီလိုနာ တောင်ပံကစားသမား အူစမန်နီဒမ်ဘီလီဟာ လီဗာပူးအသင်းက ခေါ်ယူနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ ပစ်မှတ်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဇယား ဦးဆောင်နေတဲ့ လီဗာပူးအသင်းဟာ လိုက်ပ်ဇစ်တိုက်စစ်ကစားသမား တီမိုဝါနာကို ၂၀၂၀ နှစ်စကတည်းက ဆက်သွယ်မှုတွေ…
ဆာကာ ကို စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ ယုံကြည်ချက်ရှိနေတဲ့ အာဆင်နယ်အသင်း
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဆာကာ ကို ကို အမ်းမရိတ် ကွင်းမှာ ကာလရှည် ဆက်ရှိနေစေမယ့် စာချုပ်သက်တမ်းသစ် တစ်ရပ်ကို ချုပ်ဆိုဖို့ ယုံကြည်ချက်ရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အသက် ၁၈…